Wasiirka Warfaafinta Maareeye oo ka hadlay booqashada Madaxweyne Farmaajo ee Hargeysa - Jowhar Somali news Leader
Home News Wasiirka Warfaafinta Maareeye oo ka hadlay booqashada Madaxweyne Farmaajo ee Hargeysa
Wasiirka Warfaafinta Maareeye oo ka hadlay booqashada Madaxweyne Farmaajo ee Hargeysa
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka hadlay wararka sheegaya in Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu tagayo magaalada Hargeysa.
Maxamed Cabdi Xayir Maareeye Wasiirka Warfaafinta kana mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolada Waqooyi ayaa sheegay inuusan ka war hayn safarka la sheegayo inuu Madaxweyne Farmaajo ku tagayo Hargeysa.
Hase yeeshee waxa uu sheegay wasiirku inuu mudan yahay Madaxweyne Farmaajo in lagu soo dhoweeyo magaalada Hargeysa.
“Hadii uu tagayo Madaxweyne Farmaajo Hargeysa maxay ku diidayaan, xitaa hadii sida ay sheegaan u aqoonsan yihiin dal jaar la ah, ha usoo dhaweeyaan sida Ismaaciil Cumar Geelle, Uhuru Kenyatta ama Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya”.ayuu yiri Wasiir Maareeye oo xusay in uu aad u jecel yahay shacabka Somaliland ee uu ka soo jeedo.
Wasiirka Warfaafinta Maareeye ayaa kula taliyay shacabka Somaliland in ay la yimaadaan qorshe degen oo la jaanqaadi kara siyaasada caalamka.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxaa soo baxayay warar ku saabsan in la qorsheeyo booqasho uu ku tagayo magaalada Hargeysa Madaxweyne Farmaajo oo uu la socdo ra’iisul wasaare Abiy Axmed.
Hase yeeshee ma jiro illaa hadda war rasmi ah oo ka soo baxay dowlada federalka iyo maamulka Somaliland,balse waxaa la filayaa in maalinta berri ah uu la hadlo labada gole ee Maamulka Somaliland Madaxweyne Muuse Biixi uuna ka hadlo booqashadii uu ku tegey Addis Abbaba iyo booqashada la sheegayo inay ku tagayaan Hargeysa madaxda dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya.